Inona no fomba tsara indrindra hividianana rindran-damina?
Ny birao angamba no zava-dehibe indrindra ao amin'ny Search Engine Optimization. Ary ny hevitra mba hahazoana na ny fividianana backlinks dia nanjary niavaka toy ny hatramin'izay. Noho izany, ireo izay mila manamboatra tranokala kokoa amin'ny tranokala dia mila mifantoka amin'ny backlinks. Ary ity no fanontaniana tena manan-danja indrindra - inona no fomba tsara indrindra ahafahana mividy backlinks amin'ny 2017? Andeha hojerentsika ny fomba ahafahantsika mividy rindran-damina, tsy manimba ny tranonkala manontolo miaraka amin'ny sazy mihatra amin'ny Google.
Raha mbola manontany tena momba ny fomba fiasan'izy ireo ianao dia eto ny fomba fijeriko ny lamin'arivony. Ny fitaovam-pikarohana lehibe (toy ny Google mihitsy) dia mampiasa rohy mankany amin'ny rohy (rohy mampifandray ny tranonkalanao amin'ny loharanom-baovao hafa amin'ny aterineto hafa) mba hamaritana ny fahefan'ny tranonkala. Izaho fa ny lalam-baingam-panazavana midadasika indrindra dia midika ho ny metrika voalohany izay heverin'ny design of SEO ho fanombanana mari-tranonkalan'ny pejy ao amin'ny SERPs Google.
Ireto ny tombontsoa lehibe amin'ny fananana backlinks maro:
araka ny efa voalaza, manatsara ny fikarohana ny tranonkala;
kalitaon'ny kalitaony dia ilaina amin'ny fampidiran-drakitra - vaovao farany (tahaka ny lahatsoratra bilaogy vaovao, fanehoan-kevitra, na lahatsary tafiditra vao haingana) amin'ny famakivanana tsara kokoa ny tranokalanao, indrindra amin'ny fitadiavana ny vaovao;
ny ankamaroan'ny fifamoivoizana dia manjaka matetika avy amin'ny backlinks. Tadidio fa ny fifamoivoizana mivantana avy amin'ny milina fikarohana dia tsara. Ary ahoana ny amin'ireo tranonkala ambony malaza? Eritrereto hoe misy rindran-damina sasantsasany tsara amin'ny pejy sasany manana fahefana hizaka fifamoivoizana be loatra amin'ny tranokalanao;
lamosina avo lenta no manangana ny mari-pamantarana namanao marika. Tsotra ny zava-drehetra eto - ny mpitsidika anao dia hampiseho fahalianana bebe kokoa amin'ny vokatra na serivisy atolotra anao rehefa mahita ny tenany ao amin'ny tranonkalanao amin'ny alàlan'ny tranonkala hafa;
fa, ny backlinks dia tsara ho an'ny famoronana ny fifandraisana vaovao misy anao ary ny fananganana mpihaino marobe kokoa amin'ny mpamaky na mpanaraka azy.
Noho izany, eto isika dia tonga eto amin'ny farany. Ahoana ny fomba fividianana rindran-damina, izay mety ho tsara, ary ho voaro tanteraka amin'ny tranokalanao amin'ny fotoana mitovy? Mino aho fa ho fantatrao tsara ny tsy hividianana rindran-damina, ary mety ho marina avokoa ny zava-drehetra. Ity manaraka ity dia lisitra fohy tsy dia mahafa-po ho anao:
Manan-tsaka manolotra anao hividy backlinks amin'ny fonosana. Heveriko fa ny fanaovana izany tsy misy dikany sy mampidi-doza dia mety ho lasa fomba tsotra indrindra hahazoana ny sazion'i Google. Adinoy ny loharanom-baovao an-tserasera mivarotra rindran-kaonty an-tserasera amin'ny ankapobeny sy ho an'ny rehetra;
Tsy mila mividy backlinks na tsia amin'ny mpampiasa (toy ny fanehoan-kevitry ny blaogy, maripejy, lahatsoratra anaty forum, rohy sasany avy amin'ny vondrom-piarahamonina sosialy), na ny fototra ho an'ny tranonkala (ireo rohy miala amin'ny tongotra, sidebar na tranonkala hafa amin'ny tranokala);
Misoroka ny serivisy rohy amin'ny fivarotana, ary koa ireo tranonkala mivandravandra fa afaka mividy rohy miaraka aminy ianao. Mialà amin'ireo tambajotra foibe, satria azoko antoka fa hikapoka azy ireo rehetra, na ho ela na ho haingana, ny milina fikarohana.
Raha ny marina dia tsy tokony hieritreritra ny hivadika rindranasa avy amin'ny sehatry ny fandefasana (taloha sy efa misy olona iray hafa amin'izao fotoana izao), ary koa ireo tranonkala izay tsy voasokajy ao amin'ny sehatry ny fikarohana antsoina hoe toeram-pambolena rohy, na dia tsara tarehy aza izy ireo amin'ny voalohany) Source .